यसवर्षको ‘प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार’ रुपचन्द्र विश्वकर्मालाई
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र 'इन्सेक' ले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको 'प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार –२०७६' बाजुरामा कार्यरत रुपचन्द्र विश्वकर्मालाई प्रदान गर्ने भएको छ।
गुलजारका त्रिवेणी: रगत तप्पतप्प खसिरहन्छ
टाढासम्म मेरो साथमै थियो ऊ, तर एक दिन फर्केर हेर्दा देखें- त्यो मित्र थिएन साथमा खल्ती फाटेपछि केही सिक्का हराइजान्छ !
आफ्नै स्वरुपमा फर्किंदै ३५० वर्ष पुरानो रानीपोखरी भूकम्पले भत्काएको पाँच वर्षपछि काठमाडौंको केन्द्रमा अवस्थित ३५० वर्ष पुरानो रानीपोखरीले आफ्नो पुरानो स्वरुप प्राप्त गर्दैछ। रानीपोखरीले बितेका शताब्दीहरूमा विभिन्न स्वरुपहरू पायो।
मीनबहादुर भामको ‘चिसो वर्ष’ को पटकथाले जित्यो एक करोड मीनबहादुर भामको निर्माणाधीन चलचित्र ‘चिसो वर्ष’ को पटकथाले टर्कीमा ७५ हजार युरो (करीब रु‍. १ करोड) पुरस्कार पाएको छ।
कुसुन्डा भाषामा बनेको डकुमेन्ट्री ‘ज्ञानीमैया’ को ट्रेलर सार्वजनिक कुसुन्डा भाषामा तयार गरिएको डकुमेन्ट्री ‘ज्ञानीमैया’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। भारतको बैंगलोरका सुभाशीष पानिग्रहीको निर्देशनमा बनेको डकुमेन्ट्रीको अनुवाद कुसुन्डा भाषाका अध्येता उदय आलेले गरेका हुन्।
बन्दाबन्दीमा के गर्दैछन् स्ट्यान्ड अप कमेडियन ? केही वर्षअघिसम्म शहरका रेस्टुरेन्टहरूमा ग्राहक मनोरञ्जनको लागि लाइभ म्यूजिक हुन्थ्यो । त्यो ठाउँ स्ट्यान्ड अप कमेडीले लिन थालेको बेला कोरोनाभाइरस महामारी शुरू भयो । रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएसँगै स्ट्यान्ड अप कमेडीका कलाकार पनि बेरोजगार भए ।
आइसोलेसन वार्डबाट अमिताभको ब्लगः जीवनको दौडधूपमा बल्ल समय मिल्यो कोरोनाभाइरस संक्रमित भएपछि सात दिनदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहेका अमिताभ बच्चनले आफूले गरेको, भनेको र मानेको विषय के राम्रो थियो र के खराब थियो भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने समय मिलेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानले स्थापना गर्‍यो तीनवटा नयाँ पुरस्कार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन वटा नयाँ पुरस्कार स्थापना गरेको छ । प्रतिष्ठानले नेपाल प्रज्ञालङ्कार, भानुप्रज्ञा अन्तरदेशीय नेपाली साहित्य र नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार स्थापना गरेको हो ।
'महानायक' उपाधिबारे चलचित्रकर्मी विभाजित, हमालले भने– उहाँलाई माफ गरिदिनुस् ‘महानायक’ उपाधिको कारण वेलाबखत राजेश हमाल विवादमा तानिंदै आएका छन् । तर, यसपटक उनी नभई कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला विवादमा परिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको तीव्र विरोध भएपछि राजेश हमालले फेसबूकमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै माफ गरिदिन आफ्ना समर्थकसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रेम र सौन्दर्यका चित्रकार अर्थात् श्यामलाल कलामा लामो समयसम्म गरेको अध्ययन र खोजले कलाकार श्यामलाल श्रेष्ठलाई आज रङ क्षमताका पारङ्गत शिल्पीका रूपमा उभ्याएको छ । कलामा रुचिपूर्वक संलग्न भएकैले पनि उनलाई यस क्षेत्रमा सफलता मिलेको हो भन्न सकिन्छ ।
‘लकडाउन सिर्जना शृङ्खला’ का रचनाहरु पुस्तकमा आउने बन्दाबन्दीको समयलाई रचनात्मक बनाउने उद्देश्यले पूर्वी नेपालका साहित्य साधक प्रकाश दिप्सालीको अगुवाइमा शुरु भएको ‘लकडाउन सिर्जना शृङ्खला’ मा समेटिएका रचनाहरु अब पुस्तकमा आउने भएको छ।
सुशान्तसिंह अभिनीत ‘दिल बेचारा’ ट्रेलरले तोड्यो ‘एभेन्जर्सः इन्डगेम’को यूट्युब रेकर्ड सुशान्तसिंह राजपूत अभिनीत चलचित्र ‘दिल बेचारा’को ट्रेलरले यूट्युबमा कम समयमा सबै भन्दा बढी 'लाइक' पाउन सफल भएको छ।
शङ्करनाथले के साेचेर बनाएका थिए नेपालकाे झण्डाकाे शास्त्रीय नमूना ?
पहिले झण्डाको कुनै निश्चित आकार थिएन । केवल रङ मिले पुग्थ्यो । तर उनले विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान गरी झण्डाको आधिकारिक आकार निर्धारण गरे । पछि त्यही झण्डाले मान्यता पायो ।
कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापनका लागि भइरहेको सत्याग्रह, इनफ इज इनफ, छुवाछूत विरोधी आन्दोलनलगायत विभिन्न विकृति विरुद्ध भइरहेका आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै कथा घेराले नाटक प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
विवाहको निम्तो कार्डमा चित्रकला: कहिले र कसले गर्‍यो प्रारम्भ ?
बिहे आफैंमा सुन्दरता, रहस्य र आकर्षणको विषय हो । नारी सौन्दर्यलाई अझ सुन्दर तवरले सजाउने र कलामा सो कुरा झल्काउने यस्ता चित्रकला नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा समेत आकर्षणको विषय बन्नु स्वाभाविक हो ।
क्यानभासका बादशाह अर्थात् कलाकार उत्तम नेपाली अमूर्त कलाका अग्रज कलाकारले अर्धमूर्त बिम्वमा स्रष्टाका अनुहारलाई काव्यात्मक स्वरूप प्रदान गरेका थिए । यही कला नै कला र साहित्यको निकटता प्रकट गर्ने एक माध्यम बनेको थियो ।
पूर्वाेत्तर भारतीय कलामा नेपाली संस्कृति दार्जीलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किम, शिलोङ आदि स्थानका नेपाली भाषी कलाकार सिद्धहस्त त छन् नै ख्याति पनि उत्तिकै छ ।
रुकुम घटनाको विरोधमा ‘नागरिकको लाशमाथि दुई तिहाइको नाच’ रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजायको माग तथा बन्दाबन्दी प्रभावित मजदूर र विपन्न वर्गको जीवनको रक्षा माग गर्दै शिल्पी थिएटरले खबरदारी सडक नाटक प्रस्तुत गरेको छ।
पोखरा: पानीरङकाे पाठशाला कलाकार दुर्गा बरालले पोखरामा पानीरङको ‘पाठशाला’ नै विकसित गरे । त्यसैले पोखरालाई धेरैले ‘स्कूल अफ वाटरकलर’ पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । सोही पाठशालाबाट प्रशिक्षित कलाकारहरू नै आज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउन सफल भएका छन् ।
नेपाली ललितकलाः राष्ट्रिय भावना र स्वाभिमान जगाउने युद्धकला धमिलिँदै गएको तर कालजयी इतिहासलाई कलामा उतारेर विगतको बहादुरी कालखण्ड चित्रित गर्ने कलाकारको काम एक अभिलेखनको सग्लो सचित्र दस्तावेज पनि हो ।